4 Tiknoolojiyada Suuq-Nacfiga ee Diidmada ah si aad u kobciso Waxqabadkaaga - Dhibaatooyinka Khafiifinta Khafiifka ah
Suuq-galka Dijital ah waxaa laga helaa xayeeysiinta emailka, SEO, xayeesiinta online, warbaahinta bulshadaiyo naqshadeynta bogga. Tani waxay caqabad ku tahay ganacsiyada maxaliga ah ee kaliya ee doonaya in ay sawirro qashin dheeraad ah u galaan goobahooda. Caadi ahaan, kuwaasganacsatadu waa mashquul ku ah cilmi baarista ugu fiican ee suuqgeynta ganacsigooda.
Marka la eego, Nik Chaykovskiy, oo ah Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Sare ,waxay ku faahfaahineysaa xeeladaha muhiimka ah ee suuq-geynta suuq-galka in ganacsi kasta ay qaadan karaan 2017. Mulkiilayaasha maxalliga ah sida qareennada, dhakhaatiirta ilkaha,dhakhaatiirta, iyo makhaayadaha waxay heli doonaan istiraatiijiyado aad u faa'iido leh.
1 - miodne kormoran gamma. Maskaxda ku hay, boggagaagu waa "gawaari" lagu beddelan karo.
Qodob kasta oo ka mid ah suuq-geynta sawir-gacmeedka waa inuu wado gaadiidka internetka ee internetkawebsite-ka ganacsiga. Tani waa in la tixgeliyaa si aad u muhiim ah. Website-yo badan ayaa la abuuray naqshad aan loo baahnayn oo macnaheedu yahay inay yihiininay ku adkaato inay ku socdaan qalabyada sida mobile-ka oo u egyihiin kuwo la yaab leh. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in ka badan 43% gaadiidka macaamiisha ka soo baxa mobileqalabka leh sawirka la saadaalinayo in la kordhiyo. Sidaa darteed, goob ganacsi waa in uu rafcaan u yahay si sahlan oo loo maro qalabka mobile-ka. Booqashooyinkawaa inay awoodaan in ay gujiyaan cinwaanka emailka ama lambarka telefoonka si ay ula xiriiraan milkiilaha ganacsiga ama maamulka. Intaa waxaa dheer, haddii macaamiishu leeyihiinsi ay u qoraan xiriirka, ka dibna shirkad ayaa u badan inay lumiso iyaga tartamayaasha leh goobo mobile-ka ah la fududeeyay. Fikradda, sidaas darteed,waa in lagu badalaa dadka soo booqda eater-ka, wicitaanka telefoonka ama socodka.
2. Ku samee "jawaabo qani ah" bogga internetka.
Dadku hadda waxay isbedelayaan sida ay u isticmaalaan Googlefiiri macluumaadka laakiin waxay door bidaan Google si ay uga jawaabaan su'aalahooda. Shirkad ahaan, Google ayaa ku maalgashatay fursadan iyada oo la soo bandhigayo"jawaabo qani ah" algorithm raadinta iyo horumarinta waayo-aragnimada SEO. Tani waxay bixisaa natiijooyin sax ah. Marka la eego arrimaha ganacsiga maxaliga ahmilkiiluhu wuxuu leeyahay su'aalo caadi ah oo ay inta badan ka jawaabaan macaamiisha. Sidaa darteed, waxay noqon doontaa mid cajiib ah in lagu fuliyo jawaabo taajir ah oo ku saabsan website-ka ganacsigasida ay u muuqdaan marka hore marka Google la waydiiyo su'aalo.
3. Isticmaal hababka miidhiyaha bulshada.
Sida muuqata, ganacsiyada maxaliga ah badankoodu waxay ku xayiraan marka ay go'aansadaan wadooyinka bulshadain la isticmaalo iyo sida loo soo dhejiyo waa in la sameeyaa. Xeerka muhiimka ahi waa inuu fahmo saldhiga macaamiisha. Warbaahinta bulshada ma aha fikrad cusub. Si aad u samaysomacaamiishaada, waxay bilaabaan khabiiro kale oo warbaahinta bulshada ah. Intaa waxaa dheer, in warbaahinta bulshada lagu soo dhejiyo si fudud ayaa loo abuurayaa codka ganacsigamarka lagu daro in lala xiriiro macaamiisha daacad u ah. Sidaa daraadeed, ganacsaduhu waa inuu taxadaraa inuu ka fogaado inuu ka sii daro bogga leh dookhooyin iyo khaas ah.
4. Isku duub dhinaca suuq-geynta emailka.
Sannado dhawr sano ka dib, suuq-geynta emailka ayaa loo qoondeeyay in ay waddada u furto bulshadasuuq-geynta warbaahinta. Si kastaba ha ahaatee, badiba ganacsiyada maxalliga ah, suuqgeynta emailka waa farsamo raqiis ah oo farsamo weyn leh oo lala xiriirayo macaamiisha. Instagramiyo Facebook muujiyaan kaliya qayb yar oo raacsan. Waxay u baahan yihiin inay bixiyaan lacag si ay u gaaraan dad badan. Ganacsaduhu wuxuu soo diri karaa waxyaabo cusub oo ka mid ah menu,macluumaadka dhacdooyinka iyo khaaska ah ee lacag la'aan ah adigoo isticmaalaya email. Isticmaalka MailChimp wuxuu u ogolyahay milkiilaha ganacsadaha inuu u diro fariimo ilaa 2,000 oo xiriir oo kuwaas ahhannaanka suuq-galka ah.
Gebogabadii, milkiilayaasha ganacsiyada maxalliga ah waa inay si joogto ah u eegaan ganacsigoodashabakadaha si loo hubiyo in macluumaadka xiriirka ahi uu shaqeynayo. Istaraatijiyadaha kale ee suuq-geynta suuq-galka ah ayaa markaa la fulin karaa si loogu wado baabuurtagoobta.